Subbly: Yazisa ngeNkonzo yeBhokisi yokuBhalisa kunye neQonga le-Ecommerce | Martech Zone
NgoMvulo, Aprili 19, 2021 NgoMvulo, Aprili 19, 2021 Douglas Karr
Olunye umsindo omkhulu esiwubonayo kwi-ecommerce ngu ibhokisi yomrhumo iminikelo. Iibhokisi zababhalisi ngumrhumo onomdla… ukusuka kwiikiti zokutya, kwiimveliso zabantwana, ukuya ekuphatheni izinja… amashumi ezigidi zabathengi babhalisela iibhokisi zokubhalisela. Ukulungelelaniswa, ukwenza umntu, ubutsha, ukumangaliswa, ububodwa, kunye nexabiso zizinto zonke eziqhuba ukuthengisa ibhokisi. Kumashishini e-ecommerce yoyilo, iibhokisi zokubhalisela zinokuba yinzuzo kuba ujika abathengi bexesha elinye babe ngabathengi abaphindayo.
Intengiso ye-eCommerce yentengiso ixabisa malunga ne-10 yezigidigidi (ngaphandle kweAmazon Prime kunye "nokubhalisa nokugcina" ukhetho).
Uninzi lwesoftware yobhaliso luthatha ubhaliso njengenxalenye yeshishini lakho: bayayixhasa, kodwa ihlala ingenabunkunkqele kwaye ingadibanisi ngokulula kwishishini lakho okanye kwiwebhusayithi esele ikho. Kwaye kwezinye iimeko azibhaliswanga kuqala, kwaye endaweni yoko yindawo yentengiso okanye yokuqala-eyakha iwebhusayithi.
Kuninzi ukuntsokotha kwibhokisi yokubhalisela amandla e-commerce. Iminikelo emikhulu ibandakanya ukulawulwa kweakhawunti, ukhetho lomntu, izicelo zokulibaziseka, ukufaka endaweni yoko, ukuzenzekelayo, kwaye-kunjalo ke kusenziwa intlawulo esekwe kwintlawulo. Uninzi lwamaqonga ezentengiso e-commerce awazibandakanyi ezi zakhono kumaqonga abo… efuna ukudityaniswa komntu wesithathu okanye uphuhliso lwesiko ukuze konke kusebenze kakuhle.
Subbly: Ibhokisi yobhaliso yeQonga lezoRhwebo
Ndincedisa inkampani ngoku ukuchonga lonke ukhetho lwabo lokufumana inkonzo yabo emhlabeni kwaye bafumanisa Ngezantsi. Ngenyameko inikezela ngezi zinto zilandelayo zebhokisi yokubhalisela njengesiseko seqonga labo:
Intlawulo yokubhalisa -Thatha intlawulo kubathengi bakho ephindaphindeka ngokuzenzekelayo ngaphandle kokwenza nantoni na ngesandla. Nje ukuba umthengi wakho abhalise, i-Subbly iya kukukhathalela okuseleyo ukuze uphumle ngokuzithemba usazi ukuba ingeniso yakho ephindaphindayo iza kwiveki ezayo, inyanga, okanye unyaka.
Cima imihla kwaye usete imihla yokuhlaziya -Bhatala bonke abathengi bakho ngemini enye ngenyanga nganye, setha usuku olunqumlweyo losuku lokuhambisa, kwaye ukhethe usuku lokuthunyelwa kwabathengi bakho. Ukuhlawula kunye nokuhanjiswa kwezinto ezilingana neemfuno zakho zeshishini.
"Yakha-ibhokisi" kunye nezinye iimfuno zokuhlawula -Ufuna ukuvumela abathengi bakho ukuba benze ngokwezifiso imirhumo yabo ngokuqwalasela ukhetho, okanye ukukhetha iimveliso ngaphakathi kwezinto abazithumeleyo? Sukujonga phambili, i-Subbly inomakhi okhethekileyo wophando ukuvumela umrhumo owenziwe ngokwezifiso kubathengi bakho kunye nokuvumela ukuba ubonelele ngamava esiko.
Ukuhlawulwa ngokwezifiso kunye nemijikelezo yokuhambisa -Inyanga nganye, ngeveki, ngoNyaka, ngekota nangaphaya! Hlanganisa ukuhambisa kunye nemijikelezo yetyala ukuze ulingane ngqo nokuhlawulwa kwakho kunye neemfuno zokuhambisa rhoqo. Unokuvumela abathengi bakho ukuba bakhethe oko bakukhethayo ngexesha lokuphuma.
Ukubuyiswa kwentlawulo kusilele -Ukungaphumeleli kwintlawulo yamakhadi kuyaphazamisa! I-churn engazibandakanyi inokuncitshiswa kunye nezixhobo zethu zokubuyisela ukubuyisela ezingaphumelelanga ezakhelweyo kunye nezinto esizisebenzelayo.
Amaxesha okulinga -Abathengi bakho mabazame isampulu yebhokisi yokubhalisela imali esezantsi kwaye bayivuselele kumjikelo omfutshane kunesiqhelo kwixabiso elipheleleyo lobhaliso oluqhelekileyo.
Amaxesha okuzibophelela Ukutshabalalisa ubuqhetseba ngamaxesha okuzibophelela. Nika ubhaliso lweenyanga ezili-12 oluhlawulwe rhoqo ngenyanga kwaye unikezele ngesaphulelo ukukhuthaza abathengi ukuba bazibophelele.
Subbly inokudibanisa nevenkile esele ikho kwi-Wix, Shopify, Isiphambuka, WooCommerce, Weebly, okanye zingeniswe kwiiwebhusayithi zakho zangoku.
Subbly sisiseko sokubhaliswa kweqonga lokuqala le-e. Kunye nomakhi wewebhusayithi, ukuphuma komsebenzi, ukuhambisa kunye nokudityaniswa kwezinto, ukuthengisa kunye nezixhobo zokukhula, ulawulo lwabathengi (CRM), kunye nezinye izinto… liqonga elihle eliqhubeka nokukhulisa iminikelo yalo.
Zama Subbly Simahla
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lokudibana Ngezantsi kulo lonke eli nqaku.
tags: CRMiqonga le ecommercethengasquaeveraceoyikisayoibhokisi yomrhumoiqonga ibhokisi yorhumoinkonzo yobhalisoewebhuwixwoocommerce